Neumorphism ဟာ OS/UI တွေရဲ့ Design အတွက် အနာဂတ်ဖြစ်လာမှာလား?
Neumorphism တဲ့၊ ဘာစာလုံးကြီးလဲ?
ကိုယ်တိုင်လည်း မနေ့၊ တစ်နေ့ကမှ ဒီစာလုံးကို မြင်ဖူးတာ။ Dictionary ထဲလည်း ရှာမတွေ့သေး။ တကယ်တော့ Neumorphism ဆိုတာ iOS 14 နဲ့အတူ Design နယ်ပယ်မှာ အတော်လေးကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုပါ။
မကြာခင်မှာ Website Design element တွေကနေစပြီး Mobile OS နဲ့ App design တွေမှာပါ Trend တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးနေကြပြီ။
ဒါကြောင့် နောက်နောင် ဒီနာမည်ကြားလိုက်တဲ့အခါ “ငါမကြားဖူးပါလား” မဖြစ်ရအောင် ကိုယ်တိုင်တီးခေါက်မိသမျှ အကြောင်းတွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် စုစည်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Neumorphism!! A New Term
Neumorphism ကို အတိုဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင် “2D ရုပ်ထွက်ကို 3D အရသာနဲ့ ခံစားပုံဖော်ခြင်း” လို့ မြင်တယ်။ ဒီနေ့ခေတ် Smartphone OS နဲ့ UI အများစုမှာ Flat ဖြစ်တဲ့ Icon နဲ့ Interface Design တွေဟာ မမြင်ချင်မှအဆုံး မြင်နေကြရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ Skeuomorphism လို့ခေါ်တဲ့ Icon Design နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေတ်တစ်ခေတ်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီ Design နဲ့ပတ်သက်ရင် ထိပ်ဆုံးက ပြေးမြင်ပြီး ချီးကျူးအမှတ်ရကြမှာက “Steve Jobs လက်ထက်က Apple” ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ပါ။ Apple ဟာ OS Design နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေတ်တစ်ခေတ် ထူထောင်ခဲ့တယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Skeuomorphism ကို “Old Apple Style” ဆိုပြီး တင်စားခဲ့ကြတာပါ။
Skeuomorphism ဆိုတာ လက်တွေ့ဘဝက အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ Design ကို အတူယူပြီး Icon တွေအဖြစ် ပုံဖော်ဖန်တီးတာလို့ အကြမ်းဖျဥ်းမှတ်လို့ရပါတယ်။
ဥပမာ Music App icon ကို ရှေးခေတ် ဓာတ်ပြားစက်ပုံစံ၊ Video App တွေကို TV ပုံစံ စသည် နောက်ပြီး Skeuomorphism ခေတ်က Icon တွေက 3D ဆန်ပြီး Color အားဖြင့် ခပ်မှိုင်းမှိုင်းဘက်သွားတာကို iPhone user ဟောင်းတွေ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် Apple ဟာ iOS7နဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ Skeuomorphic Icon Design ကို Flat Design အဖြစ် မြေလှန်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Icon Design, Interface Design တွေဟာ အမြင်ပိုရှင်းလာတယ်။
3D ဆန်နေဖို့ မလိုတာကြောင့် အရောင်တွေပိုလှလာတယ်။ iOS7မိတ်ဆက်ခါစက ကလေးကလေး Icon နဲ့ အရောင်ဘာညာ ဝေဖန်သံတွေတိတ်စေပြီး Mobile Flat Design ရဲ့ Trend Setter အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ်ရပ်တည်ပြခဲ့တယ်။
ခုလိုဓာတ်ပြားဟောင်းပြန်ဖွင့်ရခြင်းဟာ Apple ကို ဘုန်းတော်ဖွဲ့ဖို့ထက် Icon Design, UI Design တွေရဲ့ Evolution ကိုနားလည်စေချင်လို့ပါ။
3D Animation လောကကို Toy Story နဲ့ ကိုင်လှုပ်ပြခဲ့တဲ့ Steve Jobs လက်ထက်မှာ Apple ရဲ့ OS တွေဟာ Skeuomorphism ဟာ လူကြိုက်များခဲ့ပေမယ့် Minimalism လို့ခေါ်တဲ့ “အရိုးရှင်းဆုံးဝါဒ” နဲ့ Fancy Color တွေ ခေတ်စားလာတဲ့ 2010 ကျော် ကာလတွေမှာ ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကြားက အသင့်တော်ဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာ 2019 လို ကာလအထိပဲ ဆိုပါတော့။
Animation နဲ့ နည်းပညာ Design ပိုင်းက ကံစပ်တယ်ပဲပြောရမလား။ Klaus လို့ခေါ်တဲ့ 2D ကို 3D ဆန်ဆန် ပုံဖော်ထားတဲ့ Animated Movie ဟာ Oscar Nomination အပါအဝင် ဆုအများအပြားသိမ်းပိုက်ပြီး Animation နယ်ပယ်ကို လှုပ်နှိုးခဲ့သလို “Neumorphism” လို့ခေါ်တဲ့ Design ဆိုင်ရာအခေါ်အဝေါ်ဟာလည်း OS နဲ့ UI Design နယ်ပယ်မှာ ပဲ့တင်ထပ်လာခဲ့တယ်။
တစ်ချို့က ဒါဟာ အရင်တစ်ခေတ်ဆန်းခဲ့တဲ့ Skeuomorphism ကို ပြန်အသက်သွင်းတာပါဆိုပြီး ခနဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Design နှစ်ခုကြားမှာ သိသာတဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိနေတာ မြင်ရမှာပါ။
Neu ဟာ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ 3D ကို ပြန်ချဥ်းကပ်မှုလို့ အလွယ်တွေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ချဥ်းကပ်ပုံက Skeu တုန်းကလို Icon တစ်ခုလုံးကို အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် 3D လုပ်ပစ်တာမဟုတ်ဘူး။
Neu ရဲ့ အသက်က Icon ရဲ့ Shadow နဲ့ Highlight ပါ။ အောက်ခံအရောင်ဖျော့ဖျော့ပေါ်မှာ ကိုယ်ဖော်ချင်တဲ့ပုံကို အရိပ်နဲ့အလင်းသေချာထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် Icon တစ်ခုလုံး ရုပ်လုံးကြွနေမယ့်အစား Icon ပေါ်ကပုံရိပ် (main object) ပဲ ရုပ်လုံးကြွတက်နေတဲ့ ခံစားချကိမျိုး ရစေမှာပါ။
ဒါက Icon တစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ Setting ထဲက အဖွင့်၊ အပိတ် Icon တွေ၊ Music, Camera တို့လို Interface တွေထဲက ခလုတ်နေရာတွေမှာ နဂိုဟန်မပျောက်ပဲ Realistic ပိုဖြစ်တဲ့ feeling မျိုး ပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ Klaus ကြည့်တုန်းကရခဲ့တဲ့ 2D နဲ့ 3D နယ်ပယ်ကြား သမရိုးကျမြင်ကွင်းကနေ ဖောက်ထွက်ဆန်းသစ်မှုတစ်ခုလိုပဲ ကိုယ်တွေတော့ ခံစားမိတယ်။
အခု Neumorphic Icon Design တွေကို macOS Big Sur မှာ စမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီ။ ဆိုတော့ အနှေးနဲ့အမြန် iOS ပေါ်လည်း ရောက််လာမှာပဲ။
Apple ရဲ့ ဒီအပြောင်းအလဲ အောင်မြင််မယ်ထင်ကြေးပေးကြတာဟာ Trend Setter ဖြစ်နေတာတစ််ခုထဲကြောင့်မဟုတ်ပဲ နှစ်ကာလတစ်ခုကြာ တည်ရှိိပြီီး ရိုးအီလာတဲ့ Flat Icon တွေနေရာအစားထိုးဖို့ အကောင်းဆုံးအပြောင်းအလဲအဖြစ် ယူဆကြတာကြောင့်ပါ။
ဒါကြောင့် Neumorphism ၈နှစ်နီးပါး မပြောင်းလဲတမ်းရှိလာခဲ့တဲ့ Flat Design တွေအဆုံးသတ်၊ UI Design သစ်တွေရဲ့ အနာဂတ်အဖြစ် ထင်ကြေးပေးမိပါတော့တယ်။
This article is credited to rightful owner.
Source: 9to5Mac ၊ Medium
မြန်မာငွေ ၁၇၉,၀၀၀ တန် Huawei Y6p မှာ ဘာတွေထူးခြားနေမလဲ
Petal Search ဝန်ဆောင်မှု အသစ် မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ HUAWEI